Heano makumi matatu nematatu maLinkedIn Matipi iwe kuti iwe Tweet | Martech Zone
Iko hakuna mazuva akawandisa andisiri kuverenga kuverenga kubva kuLinkedIn, kubatana nemumwe munhu paLinkedIn, kutora chikamu muboka paLinkedIn, kana kusimudzira zvirimo uye bhizinesi paLinkedIn. LinkedIn ndiyo tambo yehupenyu kune bhizinesi rangu - uye ndinofara nekusimudzira kwandakaita kuakaundi account kutanga kwegore rino. Heano mamwe matipi anonakidza kubva kune anotungamira enhau midhiya uye maLinkedIn vashandisi kubva padhuze newebhu. Ive neshuwa yekugovana iwo matipi uye uteedzere vanhu vakapa rakakura ruzivo!
Vatauri uye vatauri veveruzhinji vanonyanya kuda kuchengetedza inoyevedza LinkedIn mbiri kuchengetedza mikana yekutaura, uye kuvaka kuvimbika nevateereri. Iwo makumi matatu nematatu ma LinkedIn matipi pazasi ese akapfupikiswa mune 33 mavara kana zvishoma, zvichiita kuti zvive nyore kukurumidza kuburikidza nemazano uye kuenderera kune rakakosha basa rekushingairira munharaunda yeLinkedIn. Leslie Belknap
Tawedzera ma tweets aya kuti ugone kungoita watinya pavari kuti vateme iwo kunze!
Tweet: Usati wasvika, gadziridza yako LinkedIn mbiri; varipo vanozoiongorora kuti vaone kutendeseka kwako. @ Ethos3
Tweet: Chinja generic link kune yako webhusaiti kuita kufona yekuita, kunyanya pamaprofayera ekambani. @EntMagazine
Tweet: Gadzira zvinyorwa zvebasa rega rega rawakaita mukati mezita rebasa rega rega. Zvakanaka kuva nemazuva anopindirana. @Forbes
Tweet: Goverana ruzivo rwepamusoro-soro nenetiweki yako kuti ugadzire kubatana kunova mubatanidzwa. @ReidHoffman
Tweet: Iyo yakanakira kureba kweiyo LinkedIn yakareba-fomu machira ndeye mazana mashanu kusvika chiuru nemazana maviri emazwi. Tailor kureba kune vateereri vako. @SmallBizTrends
Tweet: Darika danho rekuti "Unoziva sei munhu uyu". Dzvanya "Unganidza" kubva pane zvawanikwa, panzvimbo yemaprofiles. @SylvanLane
Tweet: Unoda mumwe mushandisi kana kambani kuti uone yako LinkedIn mamiriro ekugadzirisa? Shandisa @mentions paunotumira. @HubSpot
Tweet: Usave wallflower. Mbiri yako ndeye 5x inowanzoonekwa kana iwe uchijoinha uye uchishingaira mumapoka. @LinkedIn
Tweet: Kana uchizvizivisa iwe, usazvifunga iwe pachako. Ipa rupo, rwechokwadi uye tarisa pane mumwe munhu. @EmmieMartin
Tweet: Kutsvaga basa idzva paLinkedIn? Usarega mukuru wako achiziva; dzima nhepfenyuro dzechiitiko chako. @CareerOutcome
Tweet: Vashandisi veLinkedIn vanovandudza avo ma profiles vanogara vachiwana mamwe mabasa anopiwa pane vezera ravo vanosangana nevanotora basa. @RimDey
Tweet: Censor pachako. Kana iwe ukasazvitaura mubvunzurudzo yebasa, usazvitaura muboka reLinkedIn, kana kutumira. @TechRepublic
Tweet: Ronga nguva yekushanda paLinkedIn. Wongorora nhoroondo yako, tarisa zvidzoreso, tora chikamu munhaurirano. @ABAesq
Tweet: Evernote uye LinkedIn inosangana; ronga mabhizinesi emakadhi, LinkedIn info, uye maneti ekubatanidza munzvimbo imwechete. @Evernote
Tweet: Shandisa yako LinkedIn profil senge yekutengesa chishandiso. Wedzera pfupi vhidhiyo nezve yako kambani kune yako mbiri. @Salesforce
Tweet: Wedzera kukosha kuma LinkedIn mapoka: govera mharidzo dzinoonekwa dzinofarira nhengo dzeboka. @JayBaer
Tweet: Maprofiles ane mifananidzo ari 14x anowanzoonekwa. Shandisa mufananidzo wehunyanzvi uine kwazvakarerekera kumashure. @LinkedIn
Tweet: Dzivisa maprofile buzzwords, akadai se: kugadzira, uye kukurudzira. Minimize zvipikisheni. Simbisa zviito. @BusinessInsider
Tweet: Usashandise otomatiki kukoka meseji: "Ndinoda kukuwedzera kune yangu yehunyanzvi network pane LinkedIn." @DailyMuse
Tweet: "LinkedIn yawana kuti makumi maviri zvinyorwa pamwedzi zvinogona kukubatsira iwe kusvika makumi matanhatu muzana yevateereri vako vakasiyana." @Buffer
Tweet: Nguva dzakanakisa dzekutumira paLinkedIn: Chipiri neChina, pakati pa7am na9am nguva yemuno. @SocialMediaWeek
Tweet: Kambani inogadziridza ine mifananidzo ine 98% yakakwira yekupa chiyero pane yekugadzirisa isina mifananidzo. @LinkedIn
Tweet: Dhawunirodha LinkedIn's Yakabatanidzwa app; yakagadzirirwa kurerutsa hukama hwehukama. @Jillianiles
Tweet: Iwe wakasarudzika. Zviratidze. Shandisa musoro wekusika panzvimbo pekutadza kuzita rako razvino rebasa. @MarketingSherpa
Tweet: Batsira vanotora, tarisiro uye vangangodaro vadyidzani kukuwana iwe; shandisa mazwi akakosha mukati mehupenyu hwako hweLinkedIn. @USnews
Tweet: Yakabudirira LinkedIn zvemukati zvinowanzo kupa zvakagadzirira-kushandisa-kutora mukutora rondedzero. @AndreyGidaspov
Tweet: Tevera kutungamira kwaDan Pink; akadzoreredza positi "matipi matatu evatauri veTED" yeiyo LinkedIn yekutsikisa chikuva. @DanielPink
Tweet: Bvumidza vanhu vaunoremekedza. Tumira meseji yekutenda kana mumwe munhu akakubvumidza. @JeffBullas
Tweet: Rondedzera ruzivo rwekuzvipira pa LinkedIn; 42% yevanoshandira maneja vanoikoshesa zvakanyanya seyakajairika basa ruzivo. @LinkedIn
Tweet: "Mapoka eInternet anopa imwe yemikana yakanakisa yekumaka iwe nevezvenhau." @Forbes
Tweet: Kutamburira kuzadza chinzvimbo mukambani yako? Panzvimbo pekuhaya munhu anoshandira ,joinha LinkedIn's Recruiter sevhisi. @NYtimes
Tweet: Goverana zvemukati zvemukati; "Zvemukati zvino zvaonekwa zvakapetwa katanhatu kupfuura zviitiko zvine chekuita nemabasa paLinkedIn." @JasonMillerCA
Tweet: Shandisa zvinoonekwa; embed SlideShare mharidzo uye infographics muprofayiri yako uye marefu-fomu mafomati. @SMExaminer
Tags: Andrew gidaspovbufferbhizinesi mukatimushambadzidaniel pinkemmie martinEthos3EvernoteForbeshubspotJason millerJay baerJeff Bullasjillian ilesLinkedIndzakabatana mapokalinkedin mharidzolinkedin profilemazano e-linkinmarketing sherpaKushambadziraSherpanew york timesReid hoffmanrim deysalesforceSocial Media Examinerpasocial media vhikisylvan lane
Iwo matatu Ekuyera eChisiko Chemukati